Ukukhetha Ifemu Yomthetho Ochwepheshe e-UAE | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
Ukukhetha i-Professional Law Firm ku-UAE
Xazulula Izinkinga Zezomthetho
Ukukhetha inkampani yezomthetho ebiza kakhulu noma engcono kunazo zonke e-UAE ngodaba lwakho lwezomthetho akuyona into elula ngaso sonke isikhathi, ngoba baningi kakhulu laphaya. Kodwa-ke, amafemu ezomthetho eza ngezindlela ezahlukahlukene nobukhulu, futhi ahlela ukusuka emisebenzini yomthetho yommeli owodwa kuya ezinkampanini ezinabasebenzi abaningi.
inkampani ephezulu yezomthetho ese Dubai
Sikusize ngokunciphisa umthelela
Ngokuya kubucayi benkinga yakho yezomthetho, kukhona amafemu omthetho amaningi ongakhetha kuwo, futhi ngokuvamile aphulwa yizinto eziningana ezinjengosayizi, uhlobo lomkhuba, isihloko sendawo, noma somthetho.
Lapho umuntu eqala ukungena ejele, umcabango wabo wokuqala ukuphuma ngokushesha. Indlela ejwayelekile yokwenza lokhu kufaka isicelo sebheyili. Uma lokhu sekwenziwe, umuntu oboshiwe uvunyelwe ukuthi ahambe, kodwa ngesimo sokuvela enkantolo uma eyalelwe. Kulesi sihloko, uzothola inqubo esemthethweni edingekayo yokukhululwa ngebheyili e-UAE.
Izinhlobo Zamafemu Omthetho
Ezindaweni eziningi, amafemu omthetho anezinhlobo ezahlukahlukene, futhi afaka:
Izindondo Zomthetho Solo
Igama libonisa ngokucacile ukuthi yilolu hlobo luni lwefemu lomthetho. Iqhutshwa ngummeli oyedwa. Abasebenza ngeSolo bavame ukuphatha izindaba zomthetho ezinhlobonhlobo zezihloko- kufaka phakathi ukulimala komuntu, umthetho womndeni, njalonjalo noma bangase basebenze ngokukhethekile endaweni ethile, njengomthetho wepropathi.
Inzuzo enkulu yokusebenza nezinkampani ezizimele zodwa ukuthi zishibhile, ziyavumelana nokuqasha abasebenzi bangaphandle njengama-paralegals kanye nochwepheshe bezomthetho futhi banikeze ukunakwa okukodwa lapho-ke ummeli ezosebenza ecaleni elilodwa ngasikhathi.
Amafemu Omthetho Amancane
Lezi zinkampani zabameli zaziwa futhi ngokuthi "amafemu ezomthetho". Basebenzisa abameli abacishe babe yishumi kuya kwabayishumi - okwenza kube lula kubameli ukusebenzisana nabanye ezindabeni eziyinkimbinkimbi zomthetho. Lezi zinkampani zabameli zinomuzwa wamafemu wabameli bodwa ngenxa yeqembu eliseduze labameli. Vumela ukumelwa ezihlokweni ezahlukahlukene.
Ama-Firm Law amakhulu
Lawa futhi abizwa ngokuthi amafemu "asebenza ngokugcwele", futhi angasukela kwabaningana abameli nabasebenzi baye ezinkulungwaneni. Ungawathola amahhovisi asemadolobheni ahlukene noma emazweni. Amafemu amaningi amakhulu abasebenza cishe kuzo zonke izindawo zomthetho futhi imvamisa ineminyango emikhulu enjengezezakhiwo, izinkampani namaqembu okuqashwa.
Ama-Transactional vs Litigation Law Firms
Izinkampani zomthetho nazo zihlukaniswa ngezinsizakalo zazo zomthetho, isibonelo, inkampani yezomthetho ingagxila kuphela kumacala wokumangalelwa izomela iklayenti enkantolo noma ingagxila ezindabeni zokuthengiselana, okubandakanya amaphepha amaningi ezinto eziphathelene nezingxabano, umshuwalense kanye nempahla.
Amafemu Omthetho Wobugebengu
Ezinye izinkampani zomthetho zisebenza kakhulu ekuzivikeleni kobugebengu njengobuqhetseba, i-DUI, kanye namanye amacala futhi zivame ukumela amakhasimende angakwazi ukukhokhela ummeli wawo wokuvikela ubugebengu. Umuntu obhekene namacala obugebengu uvame ukuqasha ummeli wokuvikela ubugebengu ukuze asize ngenqubo yobugebengu ukuze abathole mahhala noma anciphise izinhlawulo ezibucayi ezivame ukuhlotshaniswa namacala obugebengu.
Ungawahlukanisa Kanjani Amafemu Womthetho?
Ilayisensiwe nguHH Inkantolo Yombusi noma uMnyango Wezindaba Zomthetho Dubai
Noma iyiphi inkampani yomthetho ebiza usawoti wayo kufanele ibhaliswe futhi ilawulwe kahle. E-Dubai ngokwesibonelo noma iyiphi inkampani yezomthetho esiza abaninimabhizinisi ama-SME kufanele inikezwe ilayisense efanelekile nguMnyango Kahulumeni Wezindaba Zomthetho waseDubai, indikimba ebamba futhi ilawula ukubhaliswa kwezinkampani zomthetho, abameli kanye nabeluleki bezomthetho ekuphakameni kweDubai.
Amaklayenti ngokujwayelekile aqasha abameli kulezi zinsuku ngokuya ngesipiliyoni sabo endaweni yezomthetho abasebenza kuyo. Ufuna abameli abanokujula kolwazi nokuhlangenwe nakho okufakazelwe endaweni okuhambelana nezidingo zabo, futhi yilokhu ukujula kobuchwepheshe bangempela noma obonwa kwehlukanisa ummeli munye kulomunye.
Amanye amafemu asebenzise izindlela ezintsha kwimodeli yawo yokulethwa kwezinsiza okubenza bahluke kakhulu kwabanye abasasebenza amamodeli wendabuko. Lama femu avelele uma eqhathaniswa nabancintisana ngenxa yokusebenzisa kwabo ubuchwepheshe, inqubo yabasebenzi, ukuphathwa kwamaphrojekthi wezomthetho, nokwenza ngcono kwenqubo nezinye izindlela. Ukulethwa kwezinsizakalo kuhlinzeka ngomehluko owenza inkampani iqine kunabaqhudelana bayo.
Iqembu elincane nelithe xaxa liyazihlukanisa ngokusekelwe kusiqu. Bathatha abameli abavela ezikoleni zomthetho eziphezulu kanye / noma kumabhalane wenhlangano, okuvame ukudala ukubonwa kwangaphandle kobuchopho be-elite nabameli abaphezulu be-caliber ephezulu. Noma kunjalo, lokhu kubiza amakhasimende amaningi ekusebenziseni izinsizakalo zabameli ezivela kumafemu wezomthetho anjalo. Imvamisa laba abameli babhekelela izimakethe zezomthetho ezifunwa kakhulu.
Ukuhunyushwa kwemithetho nemigomo ye-UAE
Ukuphakanyiswa kommeli kuvela ekuqinisekeni nasekuqondeni iMithetho nemigomo. Ngakho-ke kujwayelekile ukuthi kusetshenziswe amasu ahlukene endabeni yezomthetho yize umphumela ungase ufane.
Ngakho-ke kubalulekile ukuya kwinhlangano yezomthetho eyiqonda ngokucacile imithetho esebenzayo, kanye nengozi engaba khona engaba nayo inkinga, futhi okubandakanya imiphumela yezomthetho izingozi ezingaba nayo.
Siwina Amacala aphezulu wephrofayili
Simele amaklayenti kuzo zonke izigaba zenqubo